अध्यादेश विवाद छिटो सल्टाउन एमालेमाथि माओवादी दबाब- समाचार - कान्तिपुर समाचार
संरक्षणको अभावमा देशकै पहिलो पाठशाला जीर्ण (भिडियो)
पुस ९, २०७४ विद्या राई
भोजपुर — जनस्तरबाट स्थापना भएको देशकै पहिलो एवम् पुरानो संस्कृत पाठशाला संरक्षणको अभावले जीर्ण बन्दै गएको छ । विसं. १८९२ मा मार्ग शुक्ल पञ्चमीका दिन जन्मिएका बालागुरु षडानन्द अधिकारीले वि.सं. १९३२ चैत्र शुक्ल रामनवमीका दिन उक्त पाठशाला खोली शिक्षाको प्रचार सुरु गरेका थिए ।
स्थापनाकालदेखि संस्कृत भाषामा वेद, व्याकरण, ज्योतिष तथा साहित्यको पढाई हुँदै आएको थियो। तत्कालीन समयमा पश्चिम नेपालका गुल्मी, सल्यान, प्युठानसम्म र छिमेकी देश भारतको सिक्किम तथा आसामबाट विद्यार्थी गुरुकुल शिक्षा आर्जन गर्न आउँथे। उनले जहाँनिया राणा शासनका समयमा व्याप्त सतीप्रथा र जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाएका थिए। दिङ्लाबजाररमा षडानन्द–सीताराम गुठी, मठ मन्दिर, बगैंचा, हाटबजारको व्यवस्था गरेका थिए। गुठीबाट स्थापना उब्जनी भएको १२ सय मुरी अन्नले संस्कृत पाठशाला व्यवस्थापन गर्न खर्च धान्ने गरेका थिए। गडीगाउँ कैलासमा स्थापना भएको पाठशाला वि.सं. १९५५ मा भञ्ज्याङमा स्थानान्तरण गरिएको थियो।
२०३६ सालको नापी अनुसार उक्त गुठीको क्षेत्रफल १ हजार ७ सय ५३ रोपनी छ। अधिकारीले जग्गा तथा खेतको आम्दानीबाट अध्यापकलाई पारिश्रमिक तथा विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, टहलुवा, नगर्ची आदि कामदारलाई पारिश्रमिक दिने व्यवस्था मिलाएका थिए। यसरी शैक्षिक चेतना अभिवृद्धि गर्दै आएका भए पनि २०५१ सालमा माननीय नरेन्द्र बस्नेतको नेतृत्वमा गुठीको नयाँ विधान जिल्ला प्रशासन कार्यालय भोजपुरबाट स्वीकृत गराएर पाठशाला र गुठीलाई स्वामित्व बाँडफाँड गरिएको थियो। पाठशालाका नाममा ६९ रोपनी र अन्य सबै जग्गा गुठीको नाममा छ। विधानसम्मत् गठन भएको नयाँ समितिले काम थाल्न नपाउँदै ०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वले गुठी अस्तव्यस्त बन्दै गयो।
स्थापना समयदेखि २०१५ सालसम्म पाठशालाका रुपमा स्थापित थियो। २०१६ सालमा षडानन्द संस्कृत प्रधान पाठशाला, वि.सं २०२१/०२२ सालमा षडानन्द संस्कृत महाविद्यालय प्रस्तावित भएको थियो। ०३० सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि षडानन्द संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका सञ्चालन भइरहेको थियो। दशक लामो द्वन्द्वको कारण गुरुकुल शिक्षा लिने विद्यार्थी घट्दै गए। २०५८ सालदेखि अन्य विद्यालयमा पढाई हुँदै आएका आधुनिक विषयको पठनपाठन सुरु भयो। अहिले बालकक्षादेखि कक्षा १२ सम्म ४ सय ८८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। वि.सं. २०२२ सालतिर स्थापना भएका विद्यालयका पुराना भवन भूकम्पका कारण जीर्ण बनेका छन्। देशकै पुरानो विद्यालय भए पनि संरक्षण राज्यपक्ष, स्थानीय तवर तथा भूतपूर्व विद्यार्थीबाट कुनै पहल नहुँदा अवस्था दयनीय बन्दै गएको प्रधानाध्यापक गोपाल तिमल्सिनाले बताए। ‘शैक्षिक, आर्थिक क्रान्ति गरेको ऐतिहासिक तपोभूमि हो, यहाँका उत्पादन देशकै विशिष्ट पदमा छन्, संरक्षण, प्रवर्द्धनमा चासो छैन,’ उनले भने। षडानन्दका नाममा राजधानी, इटहरी, झापालगायत देशका विभिन्न स्थानमा गुठी र प्रतिष्ठान स्थापना भएका छन्। ‘न त ऐतिहासिक, धार्मीक स्थलको संरक्षणमा चासो छ, न त विद्यालयकै संरक्षणमा चासो छ,’ स्थानीय तोयानाथ गौतमले बताए। विद्यालयका ६ वटा भवन छन्। भूकम्पले गर्दा सबै जीर्ण छन्। जीर्ण भवनमै पठनपाठन तथा प्रशासनिक क्रियाकलाप हुँदै आएका छन्। जिल्लाले सरकारमा पटक पटक मन्त्री र सांसद पद पाउँदै आए पनि विद्यालयको संरक्षणमा कसैको चासो पुगेको छैन। गुठीले विद्यालयसँगको सहकार्य पनि छैन। नयाँ विधानअनुसार गुठीमा सदस्य सचिव विद्यालय प्रअ हुने उल्लेख भए पनि सदस्यता लिन समेत २ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएपछि विद्यालय र गुठीबीच समन्वय कमै रहेको तिमल्सिनाले बताए।
एकसमय गुरुकुल शिक्षा मात्रै प्रदान हुँदै आएको विद्यालयमा अहिले संस्कृत विषय ऐच्छिक भइसकेको छ। कक्षा ६ मा १ सय पूर्णाकंको व्याकरण र १ सय पूर्णाकंको व्याकरण गरी २ सय पूर्णाकंको संस्कृत पढाई हुन्छ। व्याकरण सबै विद्यार्थीका लागि अनिवार्य र साहित्य ऐच्छिक राखिएको प्रअले बताए। विद्यालयले आधुनिकताअनुसार शैक्षिकस्तर उकास्न सकेको छैन। २०७० सालमा शिक्षा मन्त्रालयको अनुदानमा ७ वटा कम्प्युटर खरिद गरिएका थिए। छुट्टै शिक्षक नभएपछि थन्काएर राखिएका थिए। गतवर्षदेखि शिक्षक जुटाएको भएपनि थन्काएर राखिएका कम्प्युटर कामै नलाग्ने भएका छन्। ००७ साल अघि स्थापना भएका विद्यालयलाई १९ लाख अनुदान दिने सरकारको निर्णयअनुसार पाएको बजेटबाट निर्माण गरेको एउटा पक्की भवन र शिक्षातर्फ साढे ६ लाख बजेट निर्माण गरिएको विज्ञान प्रयोगशाला भवनबाहेक अन्य सबै भवन जीर्ण छन्। भवन र लगानी अभावका कारण साढे ६ लाखको बजेटमा स्थापना भएको पुस्तकालयसमेत व्यवस्थित गर्न समस्या रहेको विद्यालय स्रोतले बताएको छ।
आधुनिक शिक्षा अनुसार पठनपाठनमा भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या भइरहेका बेला गुरुकुल शिक्षाको पुन: जागरण गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। पटक पटकका निर्वाचनले जिल्लाको राजनीतिक नेतृत्वले छलांग मार्दै आए पनि ऐतिहासिक, धार्मिक र शैक्षिक गन्तव्यको संरक्षणमा नेता तथा नेतृत्व पंक्तिको चासो पुगेको छैन। ‘संस्कृत ब्राह्मण समुदायको प्यावाका रुपमा लिने बुझाईले गर्दा पुन: जागरण गर्न सक्ने सम्भावना कमै छ,’ निर्वाचनको प्रसंगमा जोड्दै प्रअ तिमल्सिना भन्छन्, ‘स्थानीय तहबाट आएका जनप्रतिनिधिले काम गरेका छैनन्, गरेनन् भनेर निराश बनिहाल्नुपर्ने त होइन, अबको चुनावबाट आउने प्रतिनिधिले विकासमा कति फड्को मार्छन् उनीहरुमा भर पर्ने हुन्, आशा गरौं देशले बिकास र निकास पाउला, चुनावपछि ‘ट्रयाक’ फेरिएला।’
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाबाट आउने जनप्रतिनिधिले विकासका नारालाई भाषणमै सीमित नराखेर व्यवहारमा उतार्ने र विद्यालयको व्यवस्थापनमा पनि टेवा पुग्ने उनको अपेक्षा छ।
प्रकाशित : पुस ९, २०७४ २०:३४